အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ​ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ် (အင်္ဂလိပ်: International Theravada Buddhist Missionary University သည် သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာနလက်​အောက်မှ ရန်ကုန်မြို့ရှိ သာသနာပြုတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အဝေးသင်တက္ကသိုလ် သည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးမြို့တွင် တည်ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အဝေးသင်တက္ကသိုလ်နှစ်ခုအနက် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အထက်ပိုင်းရှိ ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် ဝိဇ္ဇာဘွဲ့၊ သိပ္ပံဘွဲ့နှင့် စီးပွားရေးဘွဲ့ သင်တန်းမျာ ...
အဝေးသင်တက္ကသိုလ် သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင်တည်ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အဝေးသင်တက္ကသိုလ်နှစ်ခုအနက် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အောက်ပိုင်းရှိ ကျောင်းသားကျောင်းသူများအား ဝိဇ္ဇာ၊ သိပ္ပံဘွဲ့နှင့် စီးပွားရေးဘွဲ့ ...
ဘောင်းမန်း မော်စကို နည်းပညာ တက္ကသိုလ်) ဟု ခေါ်သော စက်မှုနည်းပညာတက္ကသိုလ် မော်စကိုမြို့တွင် တည်ရှိသည်။ ဘောင်းမန်းနည်းပညာတက္ကသိုလ်သည် မော်စကိုမြို့တွင် နယ်ပယ်အသီးသီးမှ အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်များနှင့် အသုံးချသိပ္ပံပညာရပ်များအတွက်B.S., M.S., B.E., M.E. နှ ...
လာမာနိုဆော့ဗ် မော်စကို တက္ကသိုလ် သည် ကျားမမရွေး ပညာသင်ကြားနိုင်သော တက္ကသိုလ်နှင့် ပြည်သူ့ သုတေသန တက္ကသိုလ်ဖြစ်ပြီး ရုရှားနိုင်ငံ၊ မော်စကိုမြို့တွင် တည်ရှိသည်။ ထိုတက္ကသိုလ်အား ၁၇၅၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် မီခါအီရ် လာမာနိုဆော့ဗ်မှ တည်ထောင်ခဲ ...
ကယ်လီဖိုးနီးယား တက္ကသိုလ် သည် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၏ ပြည်သူပိုင် တက္ကသိုလ်အုပ်စု ဖြစ်သည်။ UC လက်အောက်တွင် တက္ကသိုလ်နယ်မြေပေါင်း ၁၀ ခုရှိပြီး ကျောင်းသား စုစုပေါင်းမှာ ၁၉၁၀၀၀ ခန့်ရှိသည်။ ယူစီ၏ ပထမဦးဆုံးသော ကျောင်းပရိဝုဏ် ယူစီ ...
ကယ်လီဖိုးနီးယား တက္ကသိုလ် လော့အိမ်ဂျလိစ် နယ်မြေ အတိုကောက်အားဖြင့် သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့တွင် တည်ရှိသည့် ပြည်သူပိုင် သုတေသနပြု တက္ကသိုလ်ဖြစ်သည်။ ၁၉၁၉ ခုနှစ်တွင် တောင်ပိုင်း ပရိဝုဏ်အဖြစ် တည်ထောင်ခဲ့ပြ ...
ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်တစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်နေတဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ကယ်လီဖိုးနီးယား စက်မှုတက္ကသိုလ် ကို ၁၈၉၁ ခုနှစ်က စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ ကဲလ်တက်ချ် Caltech လို့ အတိုကောက်ခေါ်တဲ့ ကယ်လီဖိုးနီးယား စက်မှုတက္ကသိုလ်ဟာ ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ်၊ ပါဆာဒေနာ ...
ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သည့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ ကိုလံဘီယာ တက္ကသိုလ် ကို ၁၇၅၄ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိသက်တမ်းအရှည်ဆုံး တက္ကသိုလ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် အစဉ်အလာကြီးမားခဲ့သော ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ် ...
ဂျော့ဂျ်တောင်း တက္ကသိုလ် သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဝါရှင်တန်ဒီစီတွင် တည်ရှိသော တက္ကသိုလ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ရှေးကာလကတည်းက အဆင့်မြင့်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်နေသော ဂျော့ဂျ်တောင်း တက္ကသိုလ်သည် အမေရိကန်တွင် ရှေးအကျဆုံး ကက်သလစ်နှင့် ဂျီးဆု အဆင့်မြ ...
စတန်းဖို့ဒ် တက္ကသိုလ် ၏ အမည်အပြည့်အစုံမှာ လေလန် စတန်းဖို့ဒ် ဂျူနီယာ တက္ကသိုလ် ဖြစ်သော်လည်း အများစုက စတန်းဖို့ဒ် တက္ကသိုလ်ဟုသာ ရည်ညွှန်းခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် စတန်းဖို့ဒ်တွင် တည်ရှိသည်။ ၁၈၉၁ ခုနှစ်တွင် မီးရထားလမ် ...
ဒတ်မောက်ကောလိပ် သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ နယူးဟမ်ရှိုင်းယား ပြည်နယ်၊ ဟန်နိုဗာမြို့ရှိ ပုဂ္ဂလိကအိုင်ဗီလိဂ် သုတေသနတက္ကသိုလ်ဖြစ်သည်။ ၁၇၆၉ ခုနှစ်တွင် အယ်လီဇာဝီးလ်လော့ခ် မှ တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၎င်းသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ ၉ ခုမြောက် အဆင့်မြင့်ပညာရေးဌာနဖြစ် ...
မက်ဆာချူးဆက် စက်မှုတက္ကသိုလ် သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ် ကိန်းဘရစ်ချ်မြို့တွင် တည်ရှိသော ပုဂ္ဂလိက သုတေသန တက္ကသိုလ် တစ်ခုဖြစ်သည်။ အမ်အိုင်တီတွင် ကျောင်း ၅ ကျောင်း နှင့် ကောလိပ်တစ်ခု ရှိပြီး ပညာရေး ဌာနပေါင်း ၃၂ ခု ရှိသည်။ သိပ္ပံနှင့ ...
ယေးလ်တက္ကသိုလ် သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကွန်နက်တီကက်ပြည်နယ် နျူးဟယ်ဗင်တွင် တည်ရှိသည့် ပုဂ္ဂလိကပိုင် တက္ကသိုလ်ကျောင်း ဖြစ်သည်။ ၁၇၀၁ ခုနှစ်တွင် ကနက်တစ်ကက် ကိုလိုနီနယ်၌ တည်ထောင်ခဲ့သည့် ယင်းတက္ကသိုလ်သည် အမေရိကန် တက္ကသိုလ် များအနက် တတိယမြောက် သက်တမ်းအရ ...
ဟားဗတ် တက္ကသိုလ်သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ် ကိန်းဘရစ်ချ်မြို့တွင် တည်ရှိသော ပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ် တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၁၆၃၆ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဟားဗတ်သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ရှေးအကျဆုံးသော အဆင့်မြင့် ပညာရေးနှင့် သက်ဆိုင်သော ကျောင် ...
အာရှထိပ်တန်း တက္ကသိုလ်တစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်နေတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံက ဒေလီ တက္ကသိုလ် ကို ၁၉၂၂ ခုနှစ်က စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အာရှဒေသတွင်းမှာ သက်တမ်းရှည်တဲ့ တွေထဲက တက္ကသိုလ်ထဲက တစ်ခုအပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်။
နာလန္ဒာတက္ကသိုလ် သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဗီဟာပြည်နယ်၊ နာလန္ဒာ ရှေးတက္ကသိုလ်ဟောင်းအနီး ရာဇဂြိုဟ်တွင် တည်ရှိသည်။ ဗုဒ္ဓခေတ်က နာလန္ဒာရှိ တက္ကသိုလ်ဟောင်းကို ပြန်လည်ဆန်းသစ်သည့်အနေဖြင့် ဖွင့်လှစ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် အမျိုးသမီး ...
နိုင်ငံတကာ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတက္ကသိုလ် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ကာနတကပြည်နယ်၊ ဘန်ဂလိုမြို့ရှိ ​ကျောင်းတစ်​ကျောင်းဖြစ်သည်။ ၁၉၉၉ခုနှစ်တွင် စတင်တည်​ထောင်ခဲ့ပြီး သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဆိုင်ရာ M.Tech.၊ M.Tech.၊ M.S. နှင့် PhD ဘွဲ့များ ​ပေးအပ်သည်။ ၂၀၀၅ခုနှစ် ...
နယူးကာဆယ်တက္ကသိုလ် သည် ၁၉၆၅ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သော ဩစတြေးလျနိုင်ငံရှိ အများပြည်သူ ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် နယူးဆောက်ဝေးလ်ပြည်နယ် ရှိ နယူးကာဆယ်မြို့၏ ဆင်ခြေဖုံးဖြစ်သော ကာလက်ဟမ်တွင် ပင်မ တက္ကသိုလ် ပရဝဏ် ရှိသည်။ တက္ကသိုလ်သည် နယူးဆေ ...
ဟိုချီမင်းစီးတီး နည်းပညာတက္ကသိုလ် – သည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ အမျိုးသား တက္ကသိုလ်၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်။ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ အမျိုးသား တက္ကသိုလ် နည်းပညာ သင်ကြားမှု နှင့် သုတေသန လုပ်ငန်းများတွင် အထင်ကရဖြစ်သော ပြူတိုအဖြစ် လွှဲပြောင်းခြင်းခံရသော တက္ကသိုလ် ဖြစ်သည်။ ...
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုး‌ရေး ပရဟိတကျောင်းသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ အမှတ် ရပ်ကွက်၊ ဘူတာရုံလမ်း တွင်တည်ရှိသည်။ ‌ကျောင်း၏မူလပထမအမည်သည် ပထမ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာစစ်ပွဲတွင် စစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလ တပ်စခန်းချရာ စစ်တပ်အတွင်း၌ ကရင်ဆရာ‌တော ...
အခြေခံပညာ မူလတန်းကျောင်း၊ မကျက်ကြီး သည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကဝမြို့နယ်၊ မကျက်ကြီးရွာတွင် တည်ရှိသည့် အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။
အမှတ် အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း သည် ဦးပိုင်အမှတ် ၁၆၊၃၁၊၁၁၊ အကွက်အမှတ် လမ်း၊ ၂၉ လမ်း နှင့် လမ်း၃၀ ကြား၊ ဟေမဇလရပ်ကွက်၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် တည်ရှိသည်။ သာသနာ့မြေ၊ ဘိုးဘွားပိုင်မြေ ဖြစ်သည်။
မင်ကူးကျောက်စာ ၁၉၆ ချပ် ပေစာ ၁၁၇၃၂ ထုတ် ကမ္မဝါစာ ၁၁၁ ဆူ ပုရပိုက်စာ ၁၂၄၄ ဆူ စုစုပေါင်း ၁၃၃၀၂ ဤသုတေသနစာကြည့်တိုက်သည် အထူးစာကြည့်တိုက်ဖြစ်သည်နှင့်အညီ မည်သည့်စာအုပ်ကိုမျှ ပြင်ပသို့ ထုတ်မငှားပါ။ ဌာနဆိုင်ရာများကိုသာ ငှားရမ်းပါသည်။ သာသနာရေးဦးစီးဌာနမှ ထု ...
ပိဋကတ်တိုက်သည် သရပါတံခါးအနီးတွင် ရှိသည်။ ၁၀၅၇ ခုနှစ်တွင် အနော်ရထာမင်း သည် သုဝဏ္ဏဘုမ္မိ သထုံပြည်မှ ပိဋကတ် အစုံသုံးဆယ်ကို ဆင်ဖြူ သုံးကျိပ် နှစ်စီးဖြင့် ပုဂံပြည်သို့ ပင်ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက် ပိဋကတ်တိုက်တွင် ထားရှိစေခဲ့သည်ဟု အစဉ်အလာ ဆိုကြလေသည်။ သာသနိကအဆေ ...
အထက် မြန်မာပြည်ကို ဗြိတိသျှ တို့ မသိမ်းပိုက်မီ ၁၈၈၃ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၁ ရက်နေ့ တွင် ဗားနတ်ပိဋကတ်တိုက်ကို စတင် တည်ထောင် ခဲ့လေသည်။ ယင်းကို အောက်မြန်မာနိုင်ငံမင်းကြီး ဆာ ချား အက်ဒွပ် ဗားနတ် သည် မိမိပိုင်စာအုပ်များဖြင့် အရင်း တည်ကာ စတင် တည်ထောင် ခဲ ...
သဟာယ စာကြည့်တိုက်ကို ၁၉၃၅ ခုနှစ်က မိုးကုတ်မြို့ အနောက်ပိုင်း ကျပ်ပြင်မြို့မရပ်တွင် စတင်တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ဝိုင်အမ်ဘီအေအသင်းကြီး၏ စည်းရုံးလှုံဆော်မှုနှင့် ကျပ်ပြင်မြို့မ လူမှုရေးအဖွဲ့ဝင်လူကြီးများဖြစ်သော ဦးနန်း၊ ဦးကျော်၊ ဦးသာရင်၊ ဦးချစ်စိန်တ ...
အမျိုးသားစာကြည့်တိုက် သည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ စာကြည့်တိုက်ကို နံနက် ၁ဝနာရီ မှ ညနေ ၄နာရီအထိ
ဦးဘိုးသီးပိဋကတ်တိုက် သည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ မွန်ပြည်နယ်၊ သထုံမြို့ တွင်ရှိ၍ အငြိမ်းစားဝန်ထောက် ဦးဘိုးသီးဆိုသူက ၎င်းထံတွင် စုဆောင်းထားရှိသော ပေ၊ ပရပိုဒ်၊ ပိဋကတ်တော်များဖြင့် သာဓုဇနပါသာဓိက မဟာဓမ္မစေတီတော်တိုက် အမည်ဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ သုဝဏ္ဏဘူမိ ပရိယတ ...
စစ်ရေယာဉ် သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး‎၊ သန်လျင်တပ်နယ်တွင် ပြတိုက်ရေယာဉ်အဖြစ် ခင်းကျင်းပြသထားသော သမိုင်းဝင် စစ်ရေယာဉ်‎ ဖြစ်သည်။ စစ်ရေယာဉ်သည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း‎ ကိုယ်တိုင် မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စား လက်ခံခြင်း ပြုလုပ်ခဲ့သော လွတ်လပ်ရေးနှင့်အတူ ပါရှိလာသော ...
စလေရုပ်စုံကျောင်း သည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စလေမြို့တွင် တည်ရှိသော ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ကုန်းဘောင်ခေတ် စာဆိုတော် ဦးပုည၏ မွေးရပ်မြေဇာတိဟု လူသိများပြီး သမိုင်းမှတ်တမ်း အထောက်အထားများအရ ဒုတိယ ...
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင် နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ၏ လမ်းညွှန်ချက်အရ MRT Co.,Ltd မှ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ၍ ၂၀၀၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့တွင် စတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ရာ ၂၀၀၉ ခုနှစ် မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့အထိ ၄ လခန့် အတွင်း တည်ဆောက် ပြီးစီ ...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ မိဘများဖြစ်သော ဦးဖာနှင့် ဒေါ်စုတို့လက်ထက်ကတည်းက ဆောက်လုပ်နေထိုင်ခဲ့သော အိမ် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါနေအိမ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် ၁၉၁၅ ခုနှစ်မှ ၁၉၂၉ ခုနှစ်အထိ နေထိုင်ခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ် ၏ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးဖာ ကွယ်လွန်ပြီးနောက် ဗိုလ်ချုပ် ...
မန္တလေးယဉ်ကျေးမှုပြတိုက် သည် မန္တလေး နန်းတော်၏အနောက်ဖက် လမ်း ၈၀ နှင့် ၂၄ လမ်းထောင့်တွင် တည်ရှိသော ပြတိုက်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ရတနာပုံနေပြည်တော်ကို စိုးစံခဲ့သည့် မင်း ၂ ပါးဖြစ်သော မင်းတုန်းမင်းနှင့် သီပေါမင်းတို့၏ အသုံးအဆောင်များနှင့် အခြားဝန်ကြီးများ၏ပ ...
ပုဂံရှေးဟောင်းသုတေသနပြတိုက် သည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုဂံညောင်ဦးမြို့နယ်၊ ပုဂံမြို့ဟောင်းတွင် တည်ရှိသည်။ ပုဂံရှေးဟောင်းသုတေသနပြတိုက်ကို တနင်္ဂနွေ၊ တနင်္လာနှင့် ပြန်တမ်းဝင်ရုံးပိတ်ရက်များမှ လွဲ၍ နေ့စဉ် နံနက် ကိုးနာရီမှ ညနေ လေးနာရီခ ...
သီရိခေတ္တရာပြတိုက် သည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်မြို့နယ်၊ မှော်ဇာရွာတွင် တည်ရှိသည့် ပြတိုက်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပြတိုက်များတွင် ရှေးအကျဆုံးဖြစ်ပြီး ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
အင်းဝရှေးဟောင်းသုတေသနပြတိုက် သည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ဆည်ခရိုင်၊ တံတားဦးမြို့နယ်ရှိ အင်းဝရှေးဟောင်းမြို့အတွင်း စည်တိုပုံမြို့ရိုးအနီးတွင် တည်ရှိသော ယဉ်ကျေးမှုပြတိုက်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ အင်းဝရှေးဟောင်းသုတေသနပြတိုက်တွင် အင်းဝတည်ထောင်ခဲ့သော ခေတ်အဆ ...
အမျိုးသားပြတိုက် သည် နေပြည်တော် ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ ရာဇသင်္ဂဟအဝိုင်းအနီး ရာဇသင်္ဂဟလမ်းမကြီးပေါ်တွင် တည်ရှိပြီး ၃၄.၇၉ ဧက ကျယ်ဝန်းသည်။ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့တွင် စတင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယသမ္မ ...
အမျိုးသားပြတိုက် သည် ရန်ကုန်မြို့၊ ပြည်လမ်းတွင် တည်ရှိသည်။ အမျိုးသားပြတိုက်တွင် သမိုင်းနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဆိုင်ရာပြကွက်များကို ပြသထားသည်။ ဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်သော ပစ္စည်းများ မယူရပါ။ ပစ္စည်းများကို locker များတွင် ထည့်ခဲ့နိုင်သည်။ ဝင်ကြေး ၅၀၀ကျပ် ကျသည် ...
ဟော်ဘုရားကျောင်း သည် လာအိုနိုင်ငံ၊ ဗီယန်ကျန်းရှိ ဝတ်ပြုရာ ဘုရားကျောင်းဆောင် ဖြစ်သည်။ ဝတ်သိသက္က၏ အရှေ့တောင်ဘက်၊ ဆဿသီရပ်လမ်းပေါ်တွင် ရှိသည်။ မြဘုရားအား ထားရန် ၁၅၆၅ ခုတွင် ဆောက်သည်။ ဘုရားကို ထိုင်းတို့ ယူသွားပြီးနောက် ကျောင်းဆောင်အလုံးသာ ကျန်ခြင်း ဖ ...
ဖိလိစတိုင်းယဉ်ကျေးမှုပြတိုက် သည် အစ္စရေးနိုင်ငံ အာဇုတ်မြို့ရှိ ရှေးဟောင်းသုတေသနပြတိုက်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ မြို့ဧရိယာတစ်ဝိုက်တွင် နေထိုင်သော ဖိလိစတိုင်း များ၏ ယဉ်ကျေးမှုကို ပြသထားသော ပြတိုက်ဖြစ်သည်။ ပြတိုက်သည် ဖိလိစတိုင်းယဉ်ကျေးမှုကို ပြသထားသည့် ကမ္ဘာပ ...
ပြတိုက် ဆိုသည်မှာ အများပြည်သူအကျိုးငှာ ပညာပေးနိုင်သော၊ ယဉ်ကျေးမှုအရ၊ သမိုင်းကြောင်းအရ၊ အနုပညာလက်ရာမြောက်မှုအရ တန်ဖိုးရှိသော ဒြပ်ရှိနှင့်ဒြပ်မဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် လေ့လာသုတေသနပြု၍ အများပြည်သူအား စိတ်ချမ်းမြေ့စွာ လေ့ ...
အက်စ် ငါးလုံး ဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်းခွင် နေရာချသည့် နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ဂျပန်ဝေါဟာရများဖြစ်သည့် 整理 ၊ 整頓 ၊ 清掃 ၊ 清潔 ၊ 躾 တို့ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် Sort, Set in Order, Shine, Standardize နှင့် Sustain ဟူ၍ ဘာသာပြန်အပြီးတွင် ရလာသည့်ဝေါဟာရများက ...
ရှင်သန်နိုင်သောစွမ်းရည်များ သည် မည်သည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မဆို အသက်ရှင်ရန် လူပုဂ္ဂိုလ်အသုံးပြုသော နည်းပညာများဖြစ်သည်။ ထိုနည်းပညာများသည် လူသားဘဝအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အခြေခံများဖြစ်ပြီး ရေ၊အစားအစာနှင့် ခိုလှုံရာနေရာများပါဝင်သည်။ ထိုစွမ်းရည်များသည် ...
သတ္တုရှာဖွေကိရိယာ ဆိုသည်မှာ အီလက်ထရွန်းနစ် ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး သတ္တုထည်များကို ထောက်လှမ်းနိုင်ရန် ရည်ရွယ်သည်။ ယင်းကိရိယာများသည် မမြင်နိုင်အောင် ဖုံးကွယ်ထားသော သတ္တုထည်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ပေါက်ကွဲစေတတ်သောပစ္စည်းများ၊ မြေအောက်တွင် ဖုံးကွယ်မြှု ...
ဆရာ သို့မဟုတ် သင်ပြပေးသူ ဆိုသည်မှာ တပည့်များအား ပညာသင်ကြားပေးသော ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်သည်။ "ဆာယာ" ဟူသော ပါဠိသက် ဝေါဟာရမှ လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဆာယာသည် "အေးရိပ်"ဖြစ်သည်။ တပည့်များ နားခိုစေရန် အေးမြသောအရိပ်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သောကြောင့် ဆရာဟု ခေါ်သည်။ ဆရာသည် "ဆ" န ...
ထန်းတက်လုပ်ငန်း ကို မြန်မာနိုင်ငံရှိ ထန်းပင်များ အများအပြား ပေါက်ရောက်ရာ ဒေသများတွင် လုပ်ကိုင်လေ့ရှိကြသည်။ ထန်းတက်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများကို ထန်းတောင်သူများဟု ခေါ်တွင်သည်။ ထန်းတောင်သူများသည် ထန်းပြင်ခြင်း၊ ထန်းတက်ခြင်း၊ ထန်းလျက် ချက်ခြင်း လုပ်ငန ...
ပြည့်တန်ဆာ ဟူသည် လိင်ဆက်ဆံမှုကိစ္စများအတွက် အဖိုးအခ ရယူ၍ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သူ လိင်လုပ်သား ဖြစ်သည်။ commercial sex worker ဟူ၍လည်းခေါ်သည်။ ပြည်ကြီးတန်ဆာ ဟူသော ပြည့်တန်ဆာဟူသည်မှာ ယဉ်ကျေးသော မြန်မာအသုံးအနှုန်းဖြင့် ခေါ်တွင်စေခဲ့သော မိန်းမရွှင် ညဉ့်ငှ ...
မြက်ဖျာလုပ်ငန်း ကို စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်၊ မဲဇာကျေးရွာနှင့် သင်္ဂတုံကျေးရွာတို့တွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံး ရက်လုပ်၍ ဒေသအနှံ့ဖြန့်ချိရောင်းချသည်။ မြက်ဖျာရက်လုပ်ရန်အတွက် အဓိက ကုန်ကြမ်းသည် ဒေသအခေါ် ဆီမီးတိုင် ခေါ် ရှင်မွေးလွန်းမြက်ကို အသုံးပြုကြရသည်။ ရှင်မွေးလွ ...